Home News Aqoonyahan ku baaqay in lala heshiiyo Shabaab ama Daacish
Aqoonyahan ku baaqay in lala heshiiyo Shabaab ama Daacish
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa loogu baaqay inay soo dhaweyso Xarakadda Al- shabaab iyo ururka Daacish cida Wada-hadalka diyaar u ah, xili dagaal ay isugu hanjabeen.
Waxa uu sheegay in labadda garab midkood uu diyaar u yahay wada-hadal,islamarkaana la joogo xiligii laga faaideysan lahaa,madaama uu loolan xiligaan u dhaxeeyo.
Dhanka kale waxa uu sheegay in labadad dhinac awoodooda ay hoos u dhacday, dhawaan la waayi doono.
Hadalkaan ayaa imaanaya xili Daacish ay dhawaan ku hanjabeen in ay la dagaalami doonaan Shabaab,madaama ay kordhiyeen beegsiga ay ku hayaan, sidoo kale hogaanka Shabaab oo war Soo saaray ayaa dhankooda ku dhawaaqay dagal ka dhan ah Daacish.
Previous articleWar Deg Deg ah:-Qarax xoogan oo ka dhacay Agagaarka Villa Soomaaliya
Next articleWararkii ugu dambeeyay Dil naxdin leh oo ka dhacay Muqdisho